कृषि र किसान Archives - Chautari Post Online
Jun252019 by Chautari Post OnlineNo Comments
स्याङ्जाका विद्यार्थीले बनाए बाँदर धपाउन मेसिन
स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले बाँदर लखेट्ने यन्त्र निर्माण गरेको छ। यन्त्रको परीक्षण सफल भएसँगै बाँदरले सताएर हैरान वालिङबासीलाई राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ। वालिङ नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित इनोभेसन सेन्टरका प्रशिक्षार्थीले बाँदर धपाउने यन्त्र (मङ्की रिटेलर डिभाइस) तयार पारेका हुन्। नेपाल स्मार्ट इनोभेसन रोबो जुनियर प्रोग्राम अन्तर्गत प्रशिक्षित बालबालिकाले बाँदर धपाउने यन्त्र निर्माणमा सफलता पाएका हुन्। एउटा बाँदरमा गरिएको परीक्षण सफल पनि भएको छ। फ्रिक्वेन्सी मोडुलर मार्फत् बाँदरलाई अत्यन्त झ्याउ लाग्दो आवाज निस्कने गरी बाँदर धपाउने यन्त्र बनाइएको नेपाल स्मार्ट इनोभेसन रोवो जुनियर प्रोग्रामका प्रशिक्षक इन्जिनियर सृजन सुवेदीले जानकारी दिए। ‘सानो आकारको सो यन्त्रमा बाँदरलाई झ्याउ लाग्ने खालको आवाज राखिएको छ। जुन आवाज मानिसका लागि अत्यन्तै मसिनो हुन्छ। बाँदरका लागि भने ठूलो र इरिटेटेड
Jun242019 by Chautari Post OnlineNo Comments
लमजुङ। मकै थन्क्याउन र धान रोप्न व्यस्त भइरहेका बेला यहाँका अलैँची किसान भने बिरुवा रोप्ने चटारोमा छन् । जिल्लामा यतिबेला अलैँचीका बिरुवा लगाउने मौसम भएकाले किसानलाई बिरुवा रोप्ने चटारो भएको हो । बेंसीशहर नगरपालिका– १० खाँचेका सोमबहादुर तामाङले जेठको २९ गतेदेखि अलैँचीका बिरुवा लगाउँन थालेका हुन् । करीब ४० रोपनी क्षेत्रफलमा अलैँची रोप्ने तयारी उनले गरेका छन् । अहिलेसम्म ४५ हजार बिरुवा रोपिसकेको र अझै १० हजार बिरुवा रोप्न बाँकी रहेको तामाङले बताए । खाँचेकै धर्मराज गुरुङ पनि बिरुवा रोप्न व्यस्त छन् । उन्ले २५ रोपनी क्षेत्रफलमा ३५ हजार अलैँचीको बिरुवा लगाइसकेको बताए । अझै ३०/३५ रोपनीमा ५० हजार बिरुवा रोप्नुपर्ने छ । साउनसम्म अलैँची लगाइसक्ने किसान गुरुङले बताए । उनीहरु जस्ता अलैँची किसान यतिबेला सबै अलैँचीका बिरुवा रोप्नमा व्यस्त छन् । लुदी, छिनखोला, नयाँगाउँ, घाम्राङ, पसगाउँलगायत जि
चिया उद्योग बन्द गर्ने निर्णय
कृषि र किसान, खबर
इलाम । इलामको सूर्योदय नगरपालिकाका चिया उद्योगीले उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन् । नगरपालिकाले तोकेबमोजिम हरियोपत्ती खरीद गर्न नसक्ने भन्दै चिया उद्यमीको सङ्गठन सूर्योदय टि एशोसिएसनले आफू सम्बद्ध ५२ वटा चिया कारखाना बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । गत वर्ष चियाको मूल्य निर्धारणसम्बन्धी कार्य्विधि, २०७५ बनाएर नगरपालिकाले न्यूनतम हरियोपत्तीको मूल्य प्रतिकिलो रु ४० कायम गरेको थियो । तर उद्योगीले अहिलेको ‘सिजन’मा उत्पादन भएको चियापत्तीमा गुणस्तरअनुसार तोकेको मूल्य दिन नसक्ने जनाएका छन् । एशोसिएसनले नगरपालिकालाई पत्र पठाएर असार १२ गतेदेखि कारखाना बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । उद्योगीले यसअघि हरियो चियापत्तीको गुणस्तरका आधारमा मूल्य दिँदै आएका थिए । यसपटकदेखि उद्योगीसँग कुनै छलफल नगरी नगरपालिकाले एकलौटी ढङ्गले दरभाउ तोकेको भन्दै विरोधस्वरुप उद्योग बन्द गर्नुपरेको कार्यवाहक अध्यक्ष डिल्लीराम श्र
विज्ञले तयार पारेको मूला खेती कसरी गर्ने ?
मूला चिसो मौसममा फस्टाउने वाली काठमाडौं । मूला जमिन भित्र फल्ने हिउँदे तरकारी वाली हो । मूला काँचै खाएमा वा यसका पातको तरकारी बनाएर खाएमा, हरेक प्रकारका पाइल्समा लाभदायक हुन्छ । मूलाको सेवानले अनेकौं रोग अथ्वा मधुमेह भएकालाईसमेत लाभ हुन्छ। मूला खेती विश्व भरिनै हुने गर्दछ । मूलाका अनेक प्रजातिहरू छन् जुन आकार, रंगका आधारमा फरक-फरक हुन्छन् । कुनै प्रजातिहरू तेल उत्पादनको लागि पनि उमारिन्छ । प्राङ्गारिक र जैविक पदार्थ प्रशस्त भएको हल्का दोमट माटो मूला खेतीको लागि उपयुक्त हुन्छ । जरे वाली भएकोले चिम्टयाइलो माटो भने राम्रो हुँदैन । मूला खेतीबारे विज्ञले तयार पारेको महत्वपूर्ण बुदाहरु निम्न प्रकारका छन् । १. मूला खेतीलाई कस्तो हावापानी उपयुक्त हुन्छ ? मूला हिउँदे तरकारी वाली हो । अतः यसले ठण्डा मौसम रुचाउँदछ । तराई देखि उच्च पहाड सम्म यसको खेती हुन्छ।तापक्रमको हिसावले ५ डि.से. देखि २
सेतो च्याउ खेतीबाट कसरी प्रसस्त पैसा कमाउन सकिन्छ ? (६० टीप्स सहित)
सेतो च्याउ कस्तो किसिमको च्याउ हो र यसलाई कस्तो किसिमको हावापानीको जरुरत पर्दछ ? यो पनि एक प्रकारको ढुसी नै हो तर यसको आकार धागो वा जालो जस्तो सेतो रेशा जस्तो देखिन्छ। यो बढ्दै गएपछि सेतो छाता आकारको हुन्छ। यसलाई गोब्रे च्याउ कै जस्तो तापक्रम र सापेक्षिक आर्द्रतामा खेती गर्न सकिन्छ। १) सेतो च्याउमा गोब्रे च्याउमा लाग्ने रोगकीरा बाहेक पनि भिन्न प्रकारको समस्या देखिन्छ ? सेतो च्याउको खेती गरेको ठाउँमा कोप्रिनस जातको ढुसी अर्थात् जङ्गली च्याउ उम्रन्छन्। यस्तो जङ्गली च्याउको डाँठ लामो हुने र यसलाई हातमा माडेमा कालो मसी जस्तो झोल निस्कन्छ। यसको नियन्त्रणको लागि च्याउ खेती गरेको ठाउँमा २ प्रतिशतको फर्मा्लिनको झोल छर्कनु पर्दछ। २) सेतो च्याउको उत्पादन कतिसम्म लिन सकिन्छ ? सेतो च्याउको उत्पादन ५ के.जी. बराबरको सुकेको परालबाट ४(६ के.जी. सम्म लिन सकिन्छ। ३) सेतो च्याउ खेती गर्दा कस्ता सा
बोधिचित्तको कारोबार शुरू हुँदै गर्दा हरेक वर्षझैं यस वर्ष पनि एउटै रूखलाई पटक–पटक फरक–फरक व्यक्तिका नाममा बिक्री गरी रकम असुलेका कारण द्वन्द्व सिर्जना भएको छ । ‘अब त काटमार होलाजस्तो पो भयो, स्थानीयस्तरमा असुरक्षा बढ्यो।’ –रोशी गाउँपालिका–५का स्थानीय समाजसेवी टुल्कु लामाले बताउनुभयो। साविक सिसाखानी गाविस–३ हालको रोशी गाउँपालिका–५ मा रहेको ठकु तामाङको कित्ता नम्बर ४९६ बाट कित्ताकाट भई कायम भएको कित्ता नम्बर ९७९ को १३ रोपनी १४ आना क्षेत्रफलमा रहेको बोधिचित्तको ठूलो एक बोटमा फलेको फल २०७६ असार महिनामा टिप्न मिल्ने गरी एकमुष्ट ८१ लाख रुपियाँमा दुर्गालाल तामाङ समूहले खरिद गरी नगदै रकम भुक्तानी गरेको थियो । २०७५ साल चैत ५ गते इन्भेस्टमेन्ट बैंकको चेकबाट १० लाख, हिमालयन बैंकको चेकबाट १० लाख र बाँकी ६१ लाख रुपियाँ नगदै ठकु तामाङले बुझेका थिए । चार महिनाअगावै नगद भुक्तानी गरेको दुर्गालाल
Jun232019 by Chautari Post OnlineNo Comments
कागती खेती कसरी गर्ने ? जानी राखौं महत्वपूर्ण टिप्सहरु
काठमाडौं । कृषकले पछिल्लो समय कागतिको व्यवसायिक रुपमा खेती गर्न थालेकाछन् । कागती रसमा भिटामिन सी प्रशस्त मात्रामा पाइने हुनाले स्वास्थ्यको लागी अत्यन्तै महत्वपूर्ण फल हो । यसैले स्वास्थ्य उपयोगि कागती खेती कहिले कुन महिनामा कसरी गर्ने भनी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजनाले तयार पारको केहीे महत्वपूर्ण टिप्सहरु निम्न प्रकारका छन् । १- कागतीको विरुवा रोप्न के कस्तो तयारी गर्नु पर्छ ? कागती सम्बन्धी विज्ञको सल्लाह लिई रेखाङ्कन गरि विरुवा रोप्नु भन्दा २–३ महिना पहिले नै २–३ घनफिटको खाल्डो खन्ने । २- खाडल कहिले भर्ने र विरुवा कहिले रोप्ने ? जेठ महिना भित्र खाडल भर्ने र आषाढ महिनाम रोप्ने । ३- खाडल कहिले खन्ने? बैशाख महिना भित्र । ४- कागती खेतीको लागी कस्तो जग्गाको छनौट गर्नु पर्छ? पानी नजम्ने, बार बन्देज लगाउन सकिने, पानीको भल नआउने, म
भैसी पालन गर्ने हो ? (यसका फाईदा र चुनौतीबारे विज्ञको ५० टीप्सहरु पढ्नुस र शेयर पनि गर्नुस)
राम्रो मूर्रा भैंसीले सरदर १५०० देखि २५०० लिटर दूध एक बेतमा दिन्छ नेपालमा पालिने उन्नत नश्लका दुधालु भैंसीका जातहरु के के हुन् ? नेपालमा लोकप्रिय मुर्रा जातको भैंसी पर्छ । निली, रभी भन्ने भैंसीका जातहरु पनि प्रचलित छन् । स्थानीय भैंसीलाई मुर्रा रागोसँग क्रस गराई वर्णशंकर भैंसी गाउं-घरको लागि राम्रो मानिन्छ । २. नेपालमा मूर्रा भैंसी कुन क्षेत्रमा बढी पाईन्छ ? खासगरी तपाई जिल्लाहरु मोरङ्ग, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, नवलपरासी, रुपन्देही, बांके, बर्दिया, दाङ्ग, कैलाली र कन्चनपुरमा बढी र राम्रो जातको मूर्रा भैंसी पाईन्छ । ३. मूर्रा भैंसी हो नभनेर कसरी चिन्न सकिन्छ ? मूर्रा भैंसीको सिङ घुम्रिएको, पुच्छरको टुप्पोमा सेतो फुर्को भएको, छाला कालो रंगको र नरम पिठ्यू चौडा एवं शरीरको तुलनामा टाउंको सानो तथा शरीरमा रौं कम भएको चिल्लो र राम्रो विकसित कल्चौडो भएको ह
Jun212019 by Chautari Post OnlineNo Comments
काठमाडौं । अदुवा, वैज्ञानिक वर्गीकरणअनुसार जिन्जीविरेसी (Zingiberaceae) परिवारमा पर्ने प्रमखु बिरुवा हो । अदुवाको प्रयोग साधारणत तरकारी, मसला र औषधिको रूपमा आउँछ । यसको गानो रेशादार हुन्छ । जति कम रेशा भयो अदुवा त्यति नै राम्रो मानिन्छ । अदुवा एक महत्त्वपूर्ण नगदे बालीको रुपमा पनि लिईन्छ । यसको खेतीको लागि पानी नजम्ने जमिनको छनौट गर्नु पर्दछ । जग्गालाई २-३ पटक जोती, डल्ला फुटाई माटो बुरबुराउँदो बनाउनु पर्दछ । त्यसपछि ड्याङ खनेर त्यसमा कम्पोष्ट मल अथवा गोबरमल हाल्नु पर्दछ । त्यसको माथि अदुवाको पानालाई स-सानो टुक्रामा भाँचेर रोप्नु पर्दछ । यसै अदुवा खेती कसरी गर्ने भनी कृषि व्यवस्थापन सूचना प्रणलीले तयार पारेका महत्वपूर्ण कुराहरु एक पटक पढ्न आवस्यक छ । १, अदुवा खेतीको लागि जमिनको तयारी कसरी गरिन्छ ? अदुवा लगाउनका लागि पानी नजम्ने जमिनको छनौट गर्नु पर्दछ । जग्गालाई २-३ पटक जोती, डल्ल
निर्मलाको बाँच्ने सहारा बन्यो दाजूबाट सिकेको टमाटर खेती
कृषि र किसान, समाज भित्रका कथा
मेरो नाम निर्मला पन्त हो । मेरो घर बैतडीको खोड्पे बजारबाट पूर्वतर्फ १५ मिनेट उकालो हिंडेपछि आइपुग्छ । यो ठाउँलाई पनि खोड्पे नै भन्दछन् । हामीसँग धेरै जग्गा जमिन छैन । अलि माथि पहाडमा अलि अलि छ तर त्यहाँ धेरै चिसो भएकाले हामी त्यहाँबाट बसाइसरी यहाँ आएका हौं । यहाँ घर पनि हामीले ऐलानी जग्गामा बनाएका हौं । हामीसँग भएको तरकारी बारी पनि ऐलानी नै हो । हामी आर्थिक रुपले निकै पछि परेका छौं । नढाँटी भन्नुपर्दा हामीलाई बिहान साँझको छाक टार्न पनि निकै धौ–धौ छ । अहिले पनि हाम्रो अवस्था खासैं सुध्रिएको छैन । तर तरकारी खेतीले हामीलाई बाँच्ने सहारा दिएको छ । त्यसो भन्न पाउँदा मलाई निकै गर्व लाग्छ । रोजगारी पनि नभएको, जग्गा जमिन पनि नभएकाले हामीलाई घर चलाउन निकै गाह्रो परेको थियो । त्यसै क्रममा म माइत (बैतडी सदरमुकाम) जाँदा मेरो दाजुले बारीमा लगाएको टमाटर निकै फलेको देखें । दाजुलाई सोधें उहा